Ukulala embindini weZaandam - I-Airbnb
Ukulala embindini weZaandam
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguEllen
Indlu yethu ikumbindi weZaandam, umgama wemizuzu eli-10 ukusuka esitishini. Igumbi lokulala likumgangatho wesibini kwaye linebhedi ekhululekileyo ephindwe kabini. Kwigumbi elincinane elisecaleni kukho ifriji kwaye unokwenza ikofu kunye neti kwaye uzilungiselele isidlo sakusasa. Ukufika kwigumbi lakho kufuneka uthathe izitebhisi kwigumbi lethu lokuhlala. Sinezinja ezimbini ezincinci ezikhonkothayo kodwa azilumi.
Kukho umabonakude kwigumbi lokulala. Kwigumbi elisecaleni uya kufumana umenzi wekofu, iketile kunye nefriji. Uya kufumana nezinye izitya. Kukho i-wifi yonke indawo. Ukwabelana nathi ngendlu yangasese kunye negumbi lokuhlambela kwaye ubekwe kumgangatho wokuqala. Kumgangatho wakho kukho igumbi lokulala lomnye woonyana bethu kunye negumbi leendwendwe.
Sihlala kumgama wokuhamba kwiziko eliphilayo laseZaandam kunye nezixhobo zalo (iivenkile, iicinema, ubomi basebusuku) kunye nesikhululo. I-Zaanse Schans yimizuzu eyi-10 ukusuka kuthi. Kukho uloliwe osuka kwisikhululo amaxesha amaninzi ngeyure; oku kukwimizuzu eli-13 e-Amsterdam Central, kodwa iHaarlem ne-Alkmaar nazo azikho kude. Kuba elunxwemeni kufuneka uqhube isiqingatha seyure.
Hello, I'm Ellen (1965), and I live in Zaandam (the Netherlands, near Amsterdam), with my husband Eric (1964) and one of our four sons. I'm a family therapist, and Eric works for an advocacy organisation. we have two little dogs
Ngenxa yokuba kufuneka unyuke kwigumbi lethu lokuhlala elinekhitshi elivulekileyo, uya kuhlangana nathi rhoqo xa ufika ekhaya okanye uhamba, kodwa unokuhlala uqhagamshelana nathi okanye usibize ngemibuzo yakho. Singakunika iingcebiso malunga neendawo ezintle kwingingqi yaseZaan kunye neendawo ezingqongileyo, iindawo zokutyela kunye nezithuthi zikawonke-wonke. Kwisitrato sethu kufuneka uhlawule ukupaka, sinokukukhomba apho unokupaka khona simahla ngaphakathi kwemizuzu eyi-10 yokuhamba umgama.
Ngenxa yokuba kufuneka unyuke kwigumbi lethu lokuhlala elinekhitshi elivulekileyo, uya kuhlangana nathi rhoqo xa ufika ekhaya okanye uhamba, kodwa unokuhlala uqhagamshelana nathi o…
Inombolo yomthetho: 0479 CBBA 4E44 00D1 772F